Chrome WebNotes Stylize wuxuu wanaajin doonaa qaybsiga qaybsiga Android | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Chrome WebNotes Stylize wuxuu wanaajin doonaa qaybsiga qaybsiga Android
Chrome WebNotes Stylize wuxuu wanaajin doonaa qaybsiga qaybsiga Android
Google waxay si joogto ah uga shaqeysaa inay ku darto astaamo cusub biraawsarkooda Chrome. Tilmaamahan cusub ayaa markii ugu horreysay lagu sii daayay Chrome Canary si loogu tijaabiyo dadweynaha. Mid ka mid ah sifada noocaan ah ayaa ahayd Dib u Eegista Qarsoonnimada oo aanu daboolnay maalmo ka hor.
Helitaanka maanta, waxaan ka helnay calanka cusub ee Chrome Canary 93.0.4537.0 nooca. Waxa ay wax ka beddeli doontaa habka aan u wadaagno qaybo ka mid ah browserka Chrome-ka.
Waxaan isku dayay in aan awood u yeesho calanka ka dibna tijaabiyay astaanta. Hadda waxay ku socotaa horumarin oo aan si buuxda u shaqaynayn laakiin muuqaalku wuxuu u muuqdaa mid xiiso leh.
Waxaan ku tijaabinay qaabka WebNotes Stylize gudaha Chrome-ka annagoo awood u siinaya calanka Chrome-ka ee lagu magacaabo #webnotes-stylize. Waa kuwan natiijooyinka:
Browserkaaga ma taageeri tagtada fiidiyaha.
Sida aad ka arki karto muuqaalka, marka aad doorato oo aad wadaagto qayb qoraal ah. Waxay ku tusinaysaa ikhtiyaarka dheeraadka ah ee liiska wadaagga.
Waxay u egtahay sawir laga sameeyay qoraalka aad dooratay oo diyaar u ah in la wadaago. Muuqaal qurux badan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha Chrome ayaa soo socda goor dhow.
Chrome WebNotes Habee
Ilaa hadda, qaabka WebNotes Stylize si buuxda uma shaqeeyo. Waxaan rajeynayaa in Chrome uu hagaajiyo astaanta oo uu dhawaan ku bilaabo nooca xasilloon ee qof walba.
Waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay abuuraan oo wadaagaan qoraalada shabakadaha qaabaysan. – Android
Sidee loo tijaabiyaa kaligaa?
Ku rakib Canary Chrome 93.0.4537.0
Ka raadi WebNotes Stylize Flag
Daar WebNotes Stylize Calanka
Dib u bilaw browserka
Ka dooro qayb ka mid ah qoraalka maqaal ama degel
La wadaag oo taabo "Stylise Highlight"
Hadda, waxay ku abuuri doontaa sawir odhaahdaada.
Lama heli karo qof walba. Kaliya tijaabiyaasha Chrome Canary ayaa isticmaali kara sifadan. Aan sugno Google inuu u soo raro Chrome WebNotes Stylize si uu u noqdo nooca deggan.
Waxaad ku rakibi kartaa noocii ugu dambeeyay ee Chrome Canary ka Google Play Store iyo mareegaha kale sida APKMirror iyo APKPure.
Waxaan rajeynayaa inaad maqaalkan ka heshay mid xiiso leh oo ku saabsan qaabka Chrome WebNotes Stylize. Fadlan ku wadaag qodobkan baraha bulshada Haddii aad hayso wax talobixin ah ama su'aalo ah markaa, fadlan ku weydii qaybta faallooyinka ee hoose. Nala soco Twitter si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo wararka ku saabsan Android iyo Google. Waad ku mahadsan tahay akhrinta
Sida Fudud Loo Hubiyo Oo Loo cusboonaysiiyo Nooca MySQL
Brave vs Bromite: Isbarbardhigga Browser-ka Qarsoonnimada ugu dambeysa